China Spout pouches mveliso kunye nabenzi | Hong Bang
Uncedo lweeNgxowa zeSpout
Ingxowa yespout yinto entsha yokupakisha imo ethile uyilo oluthile lweemveliso ezisekwe kulwelo.Isizathu sokuqatshelwa kwezi ngxowa zikhutshiwe kuyilo olusebenzayo lomsebenzisi olungele ukugcina ulwelo, ipasti okanye izinto ezikhululekileyo. Ngaphandle koko, xa kuthelekiswa ne-PET eqhelekileyo okanye iibhotile zeglasi, iipokotho ezinamanzi zilula ukuthuthwa kwaye zigqibelele iishelufu zokuthengisa.Ukusetyenziswa ikakhulu kweemveliso ezinje ngokuhlamba isikhululo sepetroli, ijeli yosana, ukutya okungamanzi, iziselo ezibandayo kunye nezinto zokuhlamba njl.
Iipakethi ezikhutshiweyo ziyavalwa kwakhona kwaye ziveliswe nge-weld spout kunye ne-cap. Ezi spouts zinokuthi zilungiselelwe ukuchitheka, ukusebenziseka lula kunye nokhuseleko kwaye kungoko zilungele uluhlu lweemveliso ezinjengeziselo, iisosi okanye iiarhente zokucoca. Ubungakanani kunye nefom zingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi kunye nemfuno.
Iphakethe ye-Smart ikwabonelela ngeepakethi ezifakwayo ezibandakanya ukufakwa kunye nokuvalwa ngokungqinelana nemilinganiselo yeemveliso ezininzi.
Nantsi Ukupakisha kweHONGBANG. Sibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokupakisha iingxowa zokutya kwiimfuno ezahlukeneyo kunye nokusetyenziswa.Sixelele imfuneko sakho siya kudibana nazo zonke iintlobo zeemfuno. Asivelisi iimveliso kwaye sizama ukukuqhubela kuzo; simamela kwiimfuno zakho kunye neenjineli ezintsha eziza kusombulula iingxaki zakho zokupakisha.
Uphawu kunye Opiont
Ukuprinta kweVivi, okucwebezelayo okanye okugqityiweyo matte
Uluhlu lweSpout kunye neCaps
Yima okanye ucabalele
Ulwakhiwo oluqhelekileyo (Izixhobo) zePouches Spouches
Ulwaleko Ophakathi: Leakproof, kunye neZenzo njengomqobo wokukhusela ukuqinisekisa ukuba umxholo wesingxobo ugcinwa ukhuselekile kwaye uhlaziyekile.
Iimveliso zePasty kunye nezeLwelo
Iimveliso zasekhaya kunye neegadi
Imveliso zeMpilo kunye nezobuhle
Ulwenziwo makhe Nxibelelana
Egqithileyo Izixhobo zefowuni eziphathwayo
Okulandelayo: Iibhegi zespout-B
Flexiable Yima Up yakutya
Yima Plastic yakutya